ဘယ် Hide app မပါပဲ files, photos, videos, apps များကို Hide (ဖွက်) ပြုလုပ်ထားနည်း ~ တောပျော်လေးရဲ့နည်းပညာ
Sharing Myanmar IT Ebooks
နည်းပညာနှင့် သက်ဆိုင်သော IT Ebooks များကို လက်လှမ်းမီသလောက် စုစည်းပြီး တင်ပေးထားပါတဲ့အပြင် လိုအပ်သည့် Ebook များ ရှိပါက Email ပို့ပြီး တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးနေပါတယ်။
Joomla, Wordpress, Blogger စသော Blog များကို ကိုယ်တိုင် ရေးသားနိုင်ရန်အတွက် Video ဖိုင်များဖြင့်သော်၎င်း၊ PDF စာအုပ်များဖြင့်သော်၎င်း အသေးစိတ် အခမဲ့ ရှင်းလင်းသင်ပြ ပေးထားပါတယ်။
ဖုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းများ၊ နည်းပညာပိုင်းများ၊ Software၊ Application၊ Games များကို လက်လှမ်းမီသလောက် Update လုပ်ပေးရင်း ရေးသားဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Download Application and Games
Window, Linux, Mac စသော O/S များအတွက် လိုအပ်သော Application နှင့် Games များကို ၀ဘ်ဆိုက်တွင် အခမဲ့ Download လုပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သည့် Software များရှိပါကလည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
သင်ကြားပေးနေမှု့ကို ဆရာတစ်ယောက်လို မြင်စရာမလိုပါ။ ကျနော်တို့ သိသလောက်ကို လက်ဆင့်ကမ်း ပေးနေတယ်လို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ ပေါ့ပေါ့လေး တွေးလိုက်ပါ။ ရင်ထဲကို ခင်မင်ရင်းနှီးမှု့တွေ အလိုလိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ဆိုဒ်လေးထဲကို လာလည်ကြသောသယ်ရင်းများ ကိုယ်စိတ်နှာဖြာ ကျန်းမာချမ်သာပါစေ တစ်ခုခု မှားခဲ့ရင်လည်း စေတနာ အမှားပါ အပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့လို. တောင်းဆိုပါတယ် အဆင်ပြေရင် Member ရယ် Facebook like လေး လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ
ဘယ် Hide app မပါပဲ files, photos, videos, apps များကို Hide (ဖွက်) ပြုလုပ်ထားနည်း
1:16 AM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
အခုလိုလာရောက်တဲ.သယ်ရင်းများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည် သယ်ရင်းတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ဆိုဒ်လေးကို လာလည်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပေးပါအုန်း လိုအပ်သည်များကို Cbox တွင် ပြောကြားခဲ့ပါ ပျော်ရွှင်ပါစေ
ဘယ် Hide app မပါပဲ files, photos, videos, apps များကို
Hide (ဖွက်) ပြုလုပ်ထားနည်းကို ကလစ်ချင်တဲ့ သူများအတွက်
မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ပါးလေဖောင်းပြီး selfie ဆွဲနေကြတဲ့
ဒီနေ့လိုခေတ်မှာ selfie crazy generation တွေလည်း မနည်းမနောပဲ
Personal Data ဆိုတာ လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြပါတယ်
အချို့ဆို အချင်းအချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်တတ်ကြပြီး အခြားသော
အရေးကြီးတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကြောင့် ဘ၀ပျက်စီးသွားနိုင်ကြပါတယ်။
ဒီတော့ စမတ်ဖုန်းဆိုတာလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ဖြင့် နေလို့ ကိုင်နေရတယ်
ဆိုတာထက် နေ့စဉ်ဘ၀အတွက် အရေးတကြီး အသုံးပြုရမယ့် အသုံးဆောင်
ဖြစ်လာနေတော့လည်း လူတိုင်းနီးပါ တစ်လုံးစီ ကိုင်ဆောင်ထားကြမှာပါ။
ဒီနေ့လိုခေတ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ Personal Data များကို လုံခြုံမှုဖြင့်
ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်လေ ပိုကောင်းလေပါပဲ၊ မလိုအပ်တဲ့ ပြဿနာမရှိတော့ဘူးပေါ့။
တကယ်လို့ သင့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ files, photos, videos, apps များကို
Hide (ဖွက်) ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိမိဖုန်း Device မှာတင် ဘယ်ဆော့ဝဲ မှ
၁။ File explorer app တော့ ဖုန်းမှာ Install ပြုလုပ်ထားရပါမည်။
တကယ်လို့ မရှိသေးရင်တော့ Play Store မှာဒေါင်းလော့ရယူလိုက်ပါ။
ES File Explorer, File Expert များ OI File Manage စသည့်
သုံးခုအနက် တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။
၂။ မိမိဖုန်းတွင် ဖွက်ထားချင်သည့် ဓာတ်ပုံများနဲ့
Videos ရှိနေတဲ့ ရာသို့သွားလိုက်ပါ။
၃။ Media files ကိုရွေးချယ်ပြီး New Folder တည်ဆောက်ရပါမည်
ဒီအတွက် Create New Folder နှိပ်လိုက်ပြီး “Hidden” ဆိုပြီး
နာမည်ပေးပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
၄။ file manager app မှ Setting option တွင် ‘Show hidden files’ ဆိုတဲ့
နေရာမှ အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။
၅။ ‘Show hidden files’ ဆိုတဲ့ နေရာမှ အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်ပေးလိုက်နဲ့
Gallery နဲ့ file Manager တို့မှာ မိမိ၏ files, photos, videos, apps များ
၆။ တကယ်လို့ Hide လုပ်ထားတဲ့ files, photos, videos, apps များကို
ပြန်လည် file manager app မှ Setting option တွင် ‘Show hidden files’ ဆိုတဲ့
နေရာမှ အမှန်ခြစ်လေးကို ပြန်လည် ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
If you found this tutorial helpful, please share with your friends and family
ကွန်မန်.ရေးခြင်းသည် ဘလော.တည်ထောင်သူများရဲ. ခွန်အားပါ
ဒေါင်းလုပ်လင့်ကို နှိပ်ရင် ကြော်ညာ Page တစ်ခု ရောက်ပါမယ်။ ၅ စက္ကန့် စောင့်ပြီးညာဘက်အပေါ်ထောင့်က SKIP AD ကိုနှိ်ပ်ရင် ဒေါင်းလုပ် Page ကိုရောက်ပါမယ် ။ဝေဖန်အကြံပြုခဲ့ပါအုံးခင်ဗျာ။
*********************************** Myanmar Calendar
ဒါကတော့ ကျွန်တော့Facebook လေးပါ
ဂျူး၏ ၀တ္ထုစာအုပ်များ စုစည်းမှု
"ဟင်းချက်နည်း နှင့် မုန့်လုပ်နည်း" APk
This website is for Myanmar Nationalities and other visitors who are visiting here to get or improve IT knowledges , we are just here for supporting you visitors . And also we are warmly welcome you to give us suggestions and advising regarding our web site . Wish you all visitors to be wealthy and healthy
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ.. .Bay Gyi(UOF)
Fb Like လုပ်ခဲ့နော်
သစ်တောခရီးသည် မောင်ရဲဖြိုး(UOF) မှ မေတ္တာပို့သလိုက်ပါ၏ ကျန်းမာချမ်းသာလို့ အစစအဆင်ပြေကြပါစေ
Android Application (32)
Android Call Recorder (1)
Android game (249)
Android launcher (81)
Android Lock Screen (4)
Android wallpaper (21)
apk ဖိုင်ပြုပြင်နည်း (1)
apple game (17)
computer နည်းပညာ (2)
computer အကြောင်း (24)
cydia tweak (2)
Download လုပ်နည်း (6)
Ebook များ (24)
firmware တင်နည်း (2)
Font error (6)
gmail အကြောင်း (12)
Huwaei Theme (1)
Internet speed Software (1)
microsoft အသုံးပြုနည်းများ (2)
Net frame work (2)
pattern lock ဖြုတ်နည်း (2)
PC-Clean Software (5)
Phone Firmware များ (4)
Phone Rom (4)
Photo Shop Software (1)
Protable software (1)
Psp game (3)
Root Software (4)
Screen Recorder Software (1)
Window အခွေများ (2)
Windows Activator (5)
Windows Manager Software (2)
Windows အခွေများ (3)
Member ၀င်ခြင်းဖြင့် အားပေးကြနော်
**ကျွန်တော်ဆိုဒ်လေးထဲက Download Link များ ပျက်နေလျှင် ပြောကြားခဲ့ပါ လိုချင်သော ဆောဝဲများ Cbox တွင် တောင်းဆိုနိုင်သည်==
Copyright © 2011 တောပျော်လေးရဲ့နည်းပညာ | Creator by MC BAY GYI